Ny tsiambaratelo momba ny fanontana lisitry ny mailaka mahomby sy ny dokam-barotra amin'ny mailaka
Ny tsiambaratelo momba ny dokam-barotra amin'ny lisitry ny mailaka mahomby sy ny mailaka
Alakamisy, Desambra 3, 2009 Asabotsy, Jona 27, 2015 Scott Hardigree
Fanamarihana: Ity lahatsoratra ity dia TSY nosoratana ho an'ny tompona lisitra. Nosoratana ho an'ny mpanao dokam-barotra izay manofa lisitry ny mailaka na manao dokambarotra ao amin'ny mailaka. Raha toa ianao ka mpanao doka izay manana, na mikasa ny hampiditra mailaka avy amin'ny antoko faha-3 ao amin'ny fifangaroana varotrao dia hanampy amin'ny fampiasana tsara kokoa ny fantsona izany ary hahazo ROI tsara kokoa, miaraka amin'ny teti-bola kely kokoa. Amin'ny farany, izy io dia hanampy ny lisitry ny tompona koa. Rehefa dinihina tokoa, ny mpanao doka sambatra dia mpanao dokambarotra miverimberina.
Nandritra ny taona maro nananako tamin'ny marketing mailaka dia samy ao amin'ny masoivohon'ny marketing amin'ny mailaka ary lafiny fanofana lisitry ny mailaka, nanana resaka vitsivitsy toy izao aho, ary naveriko ny famaritana hoe: “Manafoana ny fampielezan-kevitro aho satria tsy ampy [tsindry, fitarihana, varotra, na valiny azo tsapain-tanana hafa]. ”Nisarika ilay fampielezan-kevitra ilay mpanao dokambarotra avy eo ary nandiso fanantenana ny fahombiazan'ny lisitry ny mailaka.
Saingy nisy ihany koa ny fotoana izay, talohan'ny nisarihan'ny mpanao doka (na ny masoivohom-pirenenan'izy ireo na ny lisitra) ilay fanentanana, dia vonona izy ireo hanao fanovana kely sy fitsapana indray. Ary ho an'ireo izay nahatsiaro diso fanantenana dia nahita fanatsarana teo noho eo ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra. Nozaraiko tamin'izy ireo ny tsiambaratelo iray nanandrana sy marina momba ny fanaovana doka mailaka mahomby, dia ny:
Ampifanaraho amin'ny tanjon'ny fampielezanao ny masonkarena famoronana sy fahombiazanao.
Eny. Marketing 101 io, saingy tsy afaka milaza aminao aho hoe impiry aho no nahita fa diso tanteraka ny tanjona, ny famoronana ary ny refin'ny fahombiazana. Ary rehefa eo izy ireo, dia tsy misy fahombiazana tahaka izao ny fampielezan-kevitra. (NAOTY: Noho ny antony tsy fantatra dia miseho matetika io fanovana io amin'ny alàlan'ny mailaka.)
Ny vaovao tsara dia ny fanamboarana mora izay afaka mamadika ny ROI amin'ny marketing mailaka. Rehefa mijery fanentanana mifantoka amin'ny imailaka ianao dia atombohy amin'ny fanontanianao ireto fanontaniana efatra ireto:
Inona no tanjoko amin'ity fampielezan-kevitra ity?
Mifanaraka amin'izany tanjona izany ve ny pejiko mamorona sy miantsona?
Misy dikany amin'ny mpihaino ahy ve ny tolotra omeko, ny pejy famoronana ary ny fipetrahana, fa tsy ho ahy fotsiny?
Ahoana no handrefesako ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra, ary mifanaraka amin'ny tanjona ve izany?
Inona no ezahinao ahatongavana? Marika? Nisoratra anarana? Fanontaniana momba ny varotra? Fividianana eo noho eo? Na inona na inona tanjonao dia alao antoka fa ny famoronana, ny fipetrahana ary ny fandrefesanao dia mifanaraka amin'ny tanjona ary ampanjifaina amin'ny fomba fijerin'ny mpihaino anao (izay matetika tsy mitovy amin'ny anao).
Marika ve ny tanjonao? Ny mailaka dia mahatratra ny tanjon'ny marika lehibe: fanentanana, fikambanan'ny hafatra, fankasitrahana, fikasana hividy, sns. Hitako fa ny ankamaroan'ny mpanao dokambarotra, indrindra rehefa mampiasa doka e-newsletter, dia mahita fahombiazana lehibe amin'ny doka marika amin'ny fantsona mailaka. Misarika ny famoronana, mamorona ny marika, ary manamafy ny hafatra tian'izy ireo hifaneraseran'ny mpijery amin'ny marika misy azy ireo. Saingy ny fanapahana, rehefa misy izany, dia tonga rehefa mandrefy ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny tsindry na metric hafa ny mpanao dokambarotra raha tsy noheverina hanana izany valinteny izany mihitsy ilay mpamorona. Ny marika dia refesina amin'ny fiatraikan'ny fijerena (izany hoe, fahatsapana) ny doka amin'ny fahitana sy ny tanjon'ny mpijery, fa tsy amin'ny valinteny eo noho eo. Fa kosa ampiasao ny taha-misokatra ho toy ny refesinao.
Te hitsidika ny tranokalanao na fisoratana anarana vaovao ianao? Great! Hamarino tsara fa mamolavola ny foroninao hamoronana an'io karazana valiny io. Raha ny hafatry ny dokao dia, “WidgetTown: Ireo Widget tsara indrindra manodidina. Tsindrio eto raha mila zavatra hafa. ” mety nisy fiatraikany tamin'ny fahatsapan'ny marika ny prospect, saingy tsy azonao atao ny manindry azy ireo. Nahoana izy ireo no tokony? Manana ny fampahalalana rehetra ilainy izy ireo, ary eny an-dàlana, raha mila widget izy ireo, dia mety hiantso anao izy ireo. Saingy tsy hanao tsindry izy ireo izao raha tsy izany dia mila an'izay ilain'izy ireo avy hatrany. Raha fisoratana anarana no tanjonao dia omeo antony hijerena ny mpijery. Omeo zavatra tena sarobidy (ho azy ireo) izy ireo.
Hiteraka fitarika ve ny tanjonao? Ny pejy fandrisihana sy ny fisondrotana dia ampahany manandanja amin'ny fampielezan-kevitrao. Mifamatotra amin'ny pejy fandraisana ve ny famoronana? Moa ve ny fandrisihana hampiroboroboana amin'ny famoronana dia hita mazava sy misongadina eo amin'ny pejy fandraisana? Mazava ve izany eo amin'ny pejy fitobiana (sy mailaka) ny zavatra tsy maintsy ataon'ny prospect manaraka, ary manamafy ny fandrisihana? Misy fanelingelenana (fivezivezena, rohy eo amin'ny tambajotra sosialy, sns) izay manakana ny fanantenana tsy hamita ilay asa? Ny iray amin'ireny dia afaka mampihena ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra mitarika sy mampihena ny isan'ny fitarika vokarinao.
Angamba fivarotana an-tserasera no tanjonao. Vokatra tokony hividianan'ny olona am-pahavitrihana ve sa tokony hifantoka amin'ny hetsika toy ny fialantsasatra ny fampielezankevitrao? Efa nandalo ny fizotran'ny fizahana rehetra ve ianao? Madio sy tsotra ve izy io, sa mifangaro sy cryptic? Manaraka ny fandaozana ny sarety ve ianao mba hahitanao ny toerana misy ny olana? Moa ve ny mpanome tolotra mailakao (ESP) na ny vahaolana mailaka anatiny manohana ny fialana amin'ny sarety? Mametraka cookie ao anaty tranonkalan'ny mpitsidika ve ianao ka raha miverina afaka roa andro izy ireo ary mividy an'io vokatra io dia azonao atao ny manome voninahitra ilay doka niteraka ny fitarika?
Etsy andanin'izany, aza manandrana manatratra tanjona marobe amin'ny fampielezan-kevitra iray. Ho toy ny futona izy io? Tsy manao sofa tsara be na farafara tsara be.
Ireo dia vitsivitsy monja amin'ireo singa fototra fa misy hatrany izay mety hisy fiatraikany amin'ny hetsika tadiavina ary arak'izany ny fanombatombanana ny ROI amin'ny fampielezana mailaka antoko faha-3 anao. Tsarovy fotsiny, ny tsipika misy eo amin'ny fahombiazana amin'ny marketing amin'ny mailaka sy ny tsy fahombiazana amin'ny lafiny iray. Ampiasao ireto dingana ireto mba hahazoana antoka fa mandeha tsara ny hafatrao sy ny tanjonao ary afaka mamindra ny metatra ROI eo noho eo ianao.
Tags: nichole kellylahatsoratrafananganana ekipa
Hey Valley Boys, tadidinao ChaCha?